Blue Mark လျှောက်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်မလဲ? | Online Service Center Myanmar -->
Blue Mark လျှောက်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်မလဲ?
ခဏခဏ လာလာမေးကြလို့ပါ၊ ဒီ Post ထဲမှာ ဘယ်သူတွေ၊ ဘယ်လိုဟာတွေက Blue Mark ရနိုင်ပြီး၊ လျှောက်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာကို မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ Photo လေးတွေပါ ထပ်ဖြည့်ပေးထားလိုက်ပါတယ်။
Blue Mark လျှောက်နည်း။ လွယ်လွယ်လေးပဲ သူများကို ကိုယ့် User name နဲ့ Password လည်း ပေးစရာမလိုဘူး၊ ကိုယ့် ID card တွေလည်းပေးစရာမလိုဘူး။
ဘယ်သူလျှောက်ပေးမှ၊ ဘယ်ဝါလျှောက်ပေးမှရတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူး၊ ကိုယ်တိုင် အလွယ်လေးဝင်လျှောက်လို့ရပါတယ်၊ ဘယ်နေရာမှာ ဘာဖြည့်ဆိုတာကအစ အကုန် အသေးစိတ်ရေးထားပေးတယ်။ ( အဓိကလိုအပ်တာက Blue Mark ရနိုင်တဲ့စာရင်းဝင်ဖြစ်နေဖို့ပဲလိုပါတယ်။ )
အထက်ပါ အချက်အလက်တွေကို လေ့လာပြီး သိရှိသွားပြီဆိုပါက မိမိရဲ့ Account or Page က Blue Mark ရနိုင်၊ မရနိုင်ဆိုတာကိုလည်း သိရှိသွားကြပြီထင်ပါတယ်။ ရနိုင်တယ်လို့ယူဆတယ်၊ ထင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါ Link မှာဝင်ရောက်ပြီး Blue Mark လျှောက်နည်းကြည့်ပြီး လျှောက်လို့ရပါပြီ။
Blue Mark ကို ကိုယ်တိုင်လျှောက်ကြည့်ချင်သူများအတွက်
Facebook Knowledge Video